Afar Qalad Oo Ragga Ay Sameeyaan Inta Lagu Guda Jiro Kulanka Sariirta - Aayaha
Afar Qalad Oo Ragga Ay Sameeyaan Inta Lagu Guda Jiro Kulanka Sariirta
Aayaha editorDecember 15, 2018
Miyay wanaagsanaan lahay in dhammaan ragga ay iska ilaaliyaan qaladaadkan ay ku sameeyaan sariirta? Rag badan ayaa aamisan inay ku fiicanyihiin sariirta balse wax walbo waxaa uga dheelaya qaladaadkan isagoo wanaagsan.
Haweeney kasta waxay rabtaa in ninkeeda uu iska ilaaliyo qaladaadkan ay si guud ragga u sameeyaan.
Hoos ka aqriso
Hadal la’aan inta kulanka sariirta lagu jiro
Lama garanayo sababta inta badan ragga aysan u hadlin inta lagu guda jiro kulanka sariirta, haween waxay qiimeysaa haddii aad ku tiraahdid erayo macaan adigoo korkana ka saran oo ay ciyaarta socto, lahadal oo ha u dhaqmin sidii dhagool oo kale marka erayada mcn oo dumarka lagula hadlo waqtiyadaas aad u dareemaan waxay sii kicisaa dareenkooda.
2. Deg deg ma aha nee jooji orodka
Intabadan ragga waxay kulamada sariirta u isticmaalaan si orod ah oo deg deg ayay howsha ku kala tuuraan haweenkana ma jecla taas, haweenka waxay qiimeeyaan haddii aad shaqada waqti galisid oo dhididka oo shab shab ka yiraahdo marka inaad laba mar mar bood boodid kladibna dhanka kale sariirta uga jeesatid iska ilaali.
3. Si taxadar leh u iscmaal farta
Haweenka aad ayay u qiimeeyaaan haddii aad farta si tartiib ah oo taxadar leh aad u isticmaashid kulanka sariirta waana ku mahadsantahay famakaaga.
4. Wada raaxeysta
Dareensii macaanka haweenka waxay rabaan in la xushmeeyo oo la jeclaado marka diiradda waa inay kuu saarnaataa xaaskaaga maadaama ay istaahisho.
Labo siyaabood oo kulanka sariirta ee waqtiyeysan uu ku hormari karo guurka Lamaanaha
4 Waxyaabood maalin kasta aad sameyso oo baabi’inaya awoodaada dhanka Sariirta